९० वर्षका बेहुलाले भित्र्याए ७५ वर्षकी बेहुली, किन गरिदिए दुई तर्फकै छोराछोरीले उनीहरुको विवाह ? पर्नुहुनेछ अचम्म – Classic Khabar
९० वर्षका बेहुलाले भित्र्याए ७५ वर्षकी बेहुली, किन गरिदिए दुई तर्फकै छोराछोरीले उनीहरुको विवाह ? पर्नुहुनेछ अचम्म
जीवन साथी बिना जीवन अधुरो हुन्छ । तर जीवनको उत्तरार्धमा जोडी मध्य एक जना पहिले नै गए भने एक जनाले एक्लै जिउनुपर्छ । तर संसारमा यस्ता पनि जोडी छन् जसले जीवनको उत्तरार्धमा पनि साथी पाएका छन् । एक्लोपन को भावना एक व्यक्तिको जीवन धेरै कठिन बनाउँछ, चाहे जे सुकै उमेर होस्। एक सुखी जीवन को लागी एक साथी को आवश्यकता छ। यो प्रमाणित भएको छ कि एक ९० वर्षीय पुरुष, जो आफ्नो जीवन को अन्तिम चरण मा आफ्नो जीवन बिताइरहेका थिए, एक ७५ वर्षीय महिला संग विवाह गरे। बुजुर्ग दुल्हन शफी अहमद संग उनको विवाह को चर्चा यस क्षेत्र मा ब्यापक चलेको छ।
यो घटना भारत उत्तर प्रदेशको रामपुर जिल्लाको भोट पुलिस स्टेशन क्षेत्रको नारखेडी गाउँको हो । जहाँ ९० वर्षीय वृद्ध शफी अहमद पाँच छोरीका पिता हुन्। उनकी श्रीमती धेरै बर्ष पहिले बितिन्। उनी आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणमा गाउँमै किराना पसल चलाएर बिताइरहेका छन्। उसको बुढा बुबाको एक्लोपन पाँच विवाहित छोरीहरुले देख्न सकेनन् । सबै मिलेर किन बुबाको घर पुनर्स्थापना नगर्ने निर्णय गरे। तब एक पटक फेरी जीवनको उत्तरार्धमा जिन्दगी मा दस्तक भयो र उसको बिहे ७५ बर्षिय महिला संग सबैको सहमतिमा भयो। विवाह पछि, जहाँ दुबै जोडी खुसी छन्, तब सम्पूर्ण परिवार पनि खुशी छ।
९० वर्षीय बेहुला शफी अहमदले भनिन् कि यो विवाह सुरक्षाको लागी गरिएको हो । छोरीहरु पाँच छन्, सबै विवाहित छन्। सबैजना आ (आफ्नो घरमा छन्, छोरीहरु र उनीहरुका छोराहरु, सबै खुशी छन्। अब उनीहरुलाई के थाहा छ यहाँ के भइरहेको छ ?
७५ वर्षीया दुलही आयशाले भनिन् कि विवाहको कारण यो थियो कि यस उमेरमा मलाई सहयोग गर्ने कोहि थिएनन्। त् घर पनि भत्किएको छ। त्यहाँ एक बासिन्दा र एक छोरी पनि छन्। सबै जना खुशी छन् र म पनि खुशी छु।
Prevसंखुवासभा घटना : घटनास्थलमा प्रहरी, दुई बच्चासहित ६ को कस्ले लियो ज्या’न ?
Nextसंखुवासभामा एकै परिवारका ६ जनाको कस्ले लियो ज्यान ?